China Manual Road Ukumaka Machine ifektri kanye nabaphakeli | ACE IMISHINI
I-ACE ingahlinzeka ngomshini wokumaka umgwaqo osezingeni eliphakeme. Umshini Wokumaka I-Hand Push ungomunye wemishini eyinhloko yokumaka i-thermo-melting. Ikhwalithi yokumaka incike ekusimeni kohlaka lomshini kanye nohla lokusebenza lokumaka i-hopper, ekhombisa umehluko ekusebenzeni komshini.
Umshini Wokumaka Umgwaqo We-Thermoplastic usetshenziselwa ukumaka imigqa ekhanyayo (imigqa eqondile, imigqa enamachashazi, imicibisholo yokuqondisa, izinhlamvu nezimpawu) endleleni ephezulu, idolobha lomgwaqo, indawo yokupaka, ifektri kanye nendawo yokugcina izimpahla. Inamamodeli amabili we-Hand Push neyodwa ezishintshayo (iqhutshwa yinjini).
Umshini Wokumaka Isandla (Uhlobo lwe-Screed)
Injini I-Manual one, ayikho injini
Ubukhulu 1200 mm * 900 mm * 900mm
Lokukhipha umthamo Cishe i-1500m / h yomugqa ojwayelekile owodwa oqhubekayo
Ubukhulu bamapende 1.2-4mm
Ububanzi Bohlelo Lokusebenza 100mm, 150mm, 200mm
I-LPG cylinder evamile 15kg，10kg
Umthamo wamandla we-thermoplastic 105kg
Umsebenzi Gcina upende ocibilikile ufudumele bese umaka umugqa.
Ingqikithi yesisindo somshini 125kg
Indlela yokuhambisa ubuhlalu Gear Driven, Bamba ngokuzenzakalela
Sebenza nge-preheater Yebo
Ukusebenza kahle kwansuku zonke 1000 m2
Izici Eziyinhloko Zomshini Wokumaka Umgwaqo We-Thermoplastic:
Ngokulungiswa kwamandla adonsela phansi, kukhuliswe isondo langaphambili, iMarking Machine izinzile kakhulu kunaleyo yendabuko lapho imaka ukuwela idube okungu-450mm.
Ngokuhlolwa kwamandla adonsela phansi okuphindwayo, khipha shaft entsha, umshini wokumaka ulula kakhulu, amandla we-opharetha anciphisiwe. Ngakho-ke imisebenzi yokumaka iba lula futhi iphumelele ngokwengeziwe.
Ibanga lokusebenza le-marking hopper lincishisiwe lisuka ku-300mm laya ku-200mm, ngokunemba kakhudlwana, kulula ukulilawula, ngakho-ke izinkinga ezinjengokuhoxa okuhamba kancane kwe-hopper kanye nomphetho wokulinganisa ongalingani ziyaxazululwa. Isakhiwo sokucindezela esivimba esinamaphoyinti amaningi sisetshenziselwa ukugwema ukuthakatha kokuvuza kwempahla kuvame ukuvela kwimikhiqizo efanayo ngenxa yezinhlangothi zombili ezicindezelweyo nokushiyeka okukhulu phakathi komkhiqizo ngokufanayo.
1.What mayelana mpahla?
A: Kukhethwe nguwe. Imvamisa, sincoma ukuthunyelwa kolwandle okunikezela ngamanani afanele Futhi, ngezingxenye zokungcebeleka, kungaba ku-FEDX, DHL naku-expression yabo yamazwe aphesheya.
4.Ungakwazi ukukhiqiza umshini owenziwe ngezifiso?
A: Yebo, singakwazi. Singabakhiqizi bomshini wokumaka umgwaqo we-thermoplastic eGuangzhou City ..
Langaphambilini Umshini wokumaka umgwaqo wonke
Olandelayo: 65kgs nge 10.5kn amandla isixwayisi Plate Compactor
GW42E-GW50E Uhlobo oluzenzakalelayo
Steel ibha umsiki GQ40
45mm 13 / 4inch uhlobo Japanese vibrator ukhonkolo s ...
Uhlobo lwe-GW40A 2.2KW Manual